Maamulka Galmudug oo ku baaqay in gurmad loo fidiyo dadka naafada ah ee Gaalkacyo ku nool – Radio Muqdisho
Maamulka Galmudug oo ku baaqay in gurmad loo fidiyo dadka naafada ah ee Gaalkacyo ku nool
Maamulka Galmudug ayaa ka dayriyay xaaladda nololeed dadka naafada ah ee ku nool magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug, xilli ay foodda nagu soo hayso bisha barakeysan ee Ramadaan.
Guddoomiyaha Gaalkacyo ee Galmudug Mudane Bile Diini Cali oo lahadlay Warbaahinta Qaranka kaddib kulan uu la qaatay haya’daha samafalka ayaa sheegay in u jeedka kulanka uu yahay sidii gurmad dhan waliba loogu fidin lahaa dadka aan lixaadooda dhameystirneyn, waxaana uu baaq u jeediyay shacabka Soomaaliyeed meelkasta oo ay joogaan, inay walaaladood dhibaateysan ay gurmad la soo gaaraan.
“Magaalada dad Naafo ah ayaa ku nool, Mas’uuliyad ayaa naga saaran in aan taageerno, runtii waxaan u yeernay mas’uuliyiinta ilaa iyo saddex hay’adood oo dhanka samafalka ah, waxaan kala hadalnay in gurmad loo fidiyo dadka naafada ah ee aan shaqeysan karin”.ayuu yiri Bile Diini Cali.
Qaar ka mid ah dadka aan lixaadooda dhameystirneyn oo la hadlay Warbaahinta Qaranka ayaa codsaday in ilgaar lagu eego, maadaama aysan awoodin inay shaqeystaan.
Wasaaradda Waxbarashada oo sheegtay in la joojiyay diiwaan gelinta ardayda cusub ee Imtixaanka galeysa